Waa Maxay Qorshaha Nabadeed ee Qarniga – Bariga Dhexe? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Warsame Maxamed Nuur Garaad Noor — February 5, 2020
Waa soo jeedin, ama qorshe nabadeed oo loogu talagalay xalinta khilaafka Israel iyo Falastiin, oo uu soo diyaariyey Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Qorshahan ayaa waxaa ka mid ah:- abuurista sanduuq maalgalin oo caalami ah laguna taageerayo dhaqaalaha Falastiin iyo waddamada deriska ah ee Carbeed, waxaana jirtay in Jared Kushner oo uu soddoga u yahay Trump hordhigay inta lagu gudajiray shir ka dhacay Baxreyn waxa uu yahay qorshahan oo la qabtay Juun 25 iyo 26, 2019.
Tan iyo sanadkii 2017, maamulka madaxweyne Donald Trump wuxuu diyaarinayay qorshe nabadeed oo ku wajahan Bariga Dhexe si loo soo afjaro khilaafka Carabta iyo Israel. Si rasmi ah ayaa loo soo bandhigay horaanta sanadkii 2018, ha yeeshee dib ayaa loo dhigay dhowr jeer.
Sida ay qortay Fox News, Dukumintiga mashruucan nabadda ee Mareykanka wado waxaa ku jira inta u dhexeysa 175 iyo 200 bog oo faahfaahinta heshiiskan ah. Qaar badan oo ka mid ah waxyaabaha ku jira waxaa lagu faafiyay warbaahinta iyo qeybo ka mid ah dhinacyada ay qusayso qaab faaf reeban.
Kadib 18 bilood oo qorshayn ahayd saraakiisha Mareykanka waxay keeneen soo jeedinta qorshahan iyagoo booqday afar magaalo oo Carab ah. Si kastaba ha noqotee, diyaar uma aha in si rasmi ah loogu soo bandhigo dadweynaha dunida Muslimka ah.
Marka loo eego ra’yi ururintii ay sameysay Haaretz, natiijada, 44 boqolkiiba jawaabeyaasha waxay rumaysteen in heshiiska uu xaglinaayo danna ay ugu jirto Israel kaliya, halka 7 boqolkiiba ay aaminsan yihiin in heshiiska uu Falastiin wax u taraayo.
Si rasmi ah looma shaacin. Trump waxa uu sheegay in horumar la taaban karo laga gaadhay heshiiska qarniga. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira warbixino badan oo warbaahinada caalamla qaadaa dhigaayeen, waxaana lagu soo koobi karaa xallinta arrinta Falastiin iyadoo la dhisayo dowlad Falastiin oo aan lahayn ciidan ku sugan Daanta Galbeed iyo Marinka Gaza, iyo Masar oo siinaysa dhulal dheeraad ah Falastiiniyiinta si loo dhiso garoonka diyaaradaha iyo warshado iyo isdhaafsiga ganacsi iyo beero.
Cabirka iyo qiimaha dhulka ayaa laga heshiin doonaa, buundo ayaa la abuuri doonaa oo isku xiri doonta Gaza iyo daanta galbeed si loo fududeeyo dhaqdhaqaaqa.
Dadka ree falastiin ayaa ka biyo diiday qorshahan waxay sheegeen is qudus tahay caasimada falastiin ayna aqbali karin in israel lagu sharfo loogana dhigo caasimad. Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa sidoo kale muujiyay guud ahaanba diidmada qorshayaasha Trump, isagoo yiri: “Qudus lama iibinayo, xuquuqdayada oo dhami ma aha iib, gorgortan, iyo heshiiskii shirqool ah ma yeeleyno, dadkeenuna waxay u kubtuuri doonaaan waraaqa heshiiskan qashin qubka taariikhda, “Wuxuu yidhi istiraatiijiyadda Falastiin waxay ku saleysan tahay sii wadista Halganka
“in lagu soo afjaro qabsashada Israel iyo in la muujiyo madaxbanaanida gobolka iyada oo Bariga Qudus ay tahay caasimadeena,”
Waxayna tilmaamay in aydiyaar u yihiin kooxaha reer Falastiin in ay aadaan maxkamada cadaaladda caalamiga ah, iyagoo intaa ku daray: “Waxaan maqalnay jawaabo balanqaad ah oo ka dhan ah qorshaha Trump kaliya xalku waa wada hadal ku saleysan sharciga iyo sharci ahaanshaha dowlada falastiin , kaas oo tixraac noo ah ,” lana adkeeyay. Si aan ugu hogaansano mabaadii’da qaranka soo saaray Golaha Qaranka Falastiin ee 1988.
Tags: Waa Maxay Qorshaha Nabadeed ee Qarniga ama Qorshaha Nabadeed ee Trump?
Next post Waa Maxay Caabuqa Ku Dhaca Mindhicirada?
Previous post Maxaa Sababo In Ay Xaniinyaha Biyo Galaan?